alxanka rullaluistemadka jeestay - Shiinaha Langzhi Alxanka Qalabka
alxanka jeestay rullaluistemadka Our alxanka jeestay duuban, waayo alxanka dhululubo waxaa lagu kala saari karaa is-lays, model hagaajin iyo iwm dar saldhig, isaguu drive, isaguu addoon, qooys iyo gudbiyaan qalab qalab iyo xoog drive iyo qalab etc.Transmit dhalin rullaluistemadka drive, baabuur-wadidda workpiece via khilaaf u dhexeeya rullaluistemadka drive iyo workpiece. Ogaaday tollayn gaadhya & wareeg welding.Equiped la Mashiinka alxanka si toos ah si kor loogu qaado tayada alxanka, caawin xoogga shaqada, loo hagaajiyo productio ...
Our alxanka jeestay duuban, waayo alxanka dhululubo waxaa lagu kala saari karaa is-lays, model hagaajin iyo iwm dar saldhig, isaguu drive, isaguu addoon, qooys iyo gudbiyaan qalab qalab iyo xoog drive iyo qalab etc.Transmit dhalin rullaluistemadka drive, workpiece wadista via khilaaf dhexeeya rullaluistemadka drive iyo workpiece. Ogaaday tollayn gaadhya & wareeg welding.Equiped la Mashiinka alxanka si toos ah si kor loogu qaado tayada alxanka, caawin xoogga shaqada, loo horumariyo wax soo saarka efficient.Cooperating la alxanka Buuggan, waxaa kaalin ee imtixaanka iyo shirka.
Is-lays waxaa laga codsadaa in alxanka ee dhululubo. Distance u dhexeeya rollers is-beddelo .Adjusted leexdo alxanka nagelinaysaa rollercan hogaanka-fur nooca gacanta laga hagaajin karo, bool Buugga nooca hagaajin iyo motor slide. Distance u dhexeeya rollers noqon kartaa baesd justable on dhexroorka of dhululubo. miisaanka Load isbedel ka 5T in 200T.Welding dhexroor isbedel ka 250mm in
8000mm, Customize waa la heli karaa.
: Previous qalabka girth alxanka gaadhya Small
Next: rotator alxanka
Weld jeestay Rolls